Iindaba-Imvelaphi yesixhobo sokugaya ipepile
I-Peugeot ngenene yifani yesiFrentshi. Usapho lakwaPeugeot lwaqala ukuvelisa izinto zokugaya ezahlukeneyo ngexesha lenkulungwane ye-18. “Inkampani yakwaPeugeot” evelise la shaker yenza abantu abaninzi badideke kancinci ngenxa yegama leFrench Peugeot Motor Company. Kuyafana ncam. Ngapha koko, zombini i-Peugeot pepper shaker kunye neemoto zePeugeot zezenkampani enye. I-Peugeot yayiyeyokuqala ukuvelisa izixhobo zokusila zepepile. Akukho mntu wayecinga ukuba le nkampani yayiza kwenza iimoto ngelo xesha. Intsapho yakwaPeugeot ityale imali ekuveliseni ngaphezulu kweminyaka engama-200. Kwiminyaka kamva, baqala ukuvelisa amatye okusila. Malunga no-1810, bayila baza bavelisa iindawo zokusila ezenziwa ngekofu, iipilisi zokungqusha nepepile, kunye namachiza etyuwa arhabaxa. Emva kwexesha, baqala ukuvelisa iibhayisikile, iivili zebhayisikile, iiambrela zesinyithi kunye nemizi-mveliso yeempahla. Ngo-1889, babenentsapho. Ilungu eligama linguArmand Peugeot kunye noJamani uGottlieb Daimler basebenzisana ukuvelisa imoto enamavili amathathu eqhutywa ngumphunga, eneneni iyimoto eqhutywa ngumphunga. Oku ngokuthe ngcembe kwasekwa iPeugeot Motor Inkampani, kwaye uDaimler wasebenzisana nosapho lwaseJamani iMercedes-Benz ukwenza iDaimler-Benz.
Imbali yeepilisi zokugaya iipepile zisencinci kakhulu kunembali yemveliso yeemoto. I-grinder ye-pepper yenzelwe ngabazalwana ababini bale nkampani kwiminyaka yokuqala. Omnye wayebizwa ngokuba nguJean-Frederic Peugeot (1770-1822) kwaye omnye wayebizwa ngokuba nguJean-Pierre Peugeot (uJean-Pierre Peugeot, 1768-1852), imodeli ebonwa ngokuqhelekileyo luhlobo Z. Sifumanise ukuba umhla welungelo elilodwa lomenzi wale pepper mill yayingu 1842. Ngexesha lobunikazi, umntakwabo uJean-Friedrich Peugeot wayeswelekile, ngoko ke saqikelela ukuba unyaka woyilo kufanele ukuba ube phambi ko-1822. Phambi kokuba ilungelo lomenzi ngo-1842 lahluke kancinane, kodwa ulwakhiwo lobunikazi obunemilo ye-Z lusetyenziswa namhlanje, kwaye uyilo alukatshintshi kakhulu kude kube ngoku. Olu luyilo lwemveliso olubalaseleyo olugcine uyilo lwangempela phantse iminyaka engama-200. umzekelo. Umgaqo wepeugeot pepper mill ilula kakhulu. Yityhubhu ende engenamqolo enesinyithi esifana ne-grinder yentsimbi emazantsi. Shaft lokusila liqhagamshelene nesiphatho ekupheleni kwetyhubhu. Yigaye nge grinder ezantsi. Kulula kakhulu ukongeza, ngoko ke akunakwenzeka ukuyila izixhobo ezahlukeneyo ezirhabaxa. Ngale ndlela, sele isetyenziswe phantse iminyaka engama-200.
IPeugeot pepper mill iye yaba sesona sixhobo sixhaphakileyo ekutyeni kwaseNtshona. Iveliswe yinkampani yaseFrance iPeugeot. Zininzi iinguqulelo ezahlukeneyo kwaye zinokubonwa kwiindawo zokutyela zaseNtshona kwihlabathi liphela. Kumntu ophakathi, ilitye lokusila pepper kwindawo yokutyela sisixhobo esihle. Ukusukela uyilo kunye nemveliso yePeugeot, isikhululo sepelepele sePeugeot ibe sisixhobo esifunekayo kwiindawo zokutyela zaseYurophu naseMelika.
I-Peugeot kamva yenze iipilisi zokugaya iipepile zobude obahlukeneyo kunye neemilo, kwaye ikwavelise ilitye lokusila lombane elibizwa ngokuba yiZeli Electric Pepper Mill (iZeli Electric Pepper Mill), kodwa eyona pilisi yokuqala imile njenge-Z ine-nostalgia ekhethekileyo Ukuziva ukuba kwiindawo zokutyela Ngasentshona, kokukhona unikela ingqalelo kwimizi yokugaya ipepile yakudala, kokukhona ufuna ukuzisa imeko entle yokutya.